उत्पादनशील क्षेत्रमा करको प्रभाव
नयाँ संविधानअनुसार शासकीय संरचनाका तीनै तहले जनतालाई अहिले करको बोझ बोकाएर थङ्थिलो पारिरहेको कुरा सतहमै आएको छ । प्रभावकारिता, औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने र जनताले थेग्न सक्ने÷नसक्ने पर्याप्त अध्ययनबिना नै लागू गरिएको कर प्रणालीले जनता आक्रान्त देखिएका छन् ।
सिलिन्डर ग्यास बिक्री–वितरणमा समस्या
प्रत्येक ग्यास उद्योगको बिक्री–वितरण प्रणाली फितलो भएकाले हिउँदमा माग बढी भएको समयमा सामान्य अवस्थाको कोटा प्रणाली सही नभएकाले उपभोक्ता र डिपोले दुःख पाएका छन् ।
सानै कुराबाट साहसिक आर्थिक सुधार
हालैका दिनमा विकास बहसमा आमनागरिकलाई झुक्याउने काम गरिँदै आएको छ । बलियो बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकातिर समृद्धिका कुरा गर्छन् भने अर्कातिर पूर्वनियोजित प्रश्नोत्तरसहितका टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा समृद्धि भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा मात्र मापन हुने विषय होइन पनि भन्दै आएका छन् ।
शैक्षिक समुन्नतिबाट समृद्धि
नेपालले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक प्राप्तिसँगै राजनीतिगत तथा शैक्षिक परिवर्तनका विभिन्न मोड, घुम्ती पार गर्दै आइरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन युगको घाउमा मल्हम लगाउन संविधान कार्यान्वयनका आशा र अपेक्षासँगै आत्मनिर्भर नेपालको अभिलाषा छ ।
नेपालमा दिगो विकासका चुनौती
नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरु भएको ६ दशक पुगेको छ । हालसम्म १३ वटा योजना सम्पन्न भई १४ औं ओजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । हालसम्मको विकासको गति हेर्दा सन्तोषजनक स्थिति छैन ।
बैंकिङका तथ्य र प्रवृत्तिहरू
संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पु“जी वृद्धिको पूर्वनिर्धारित समयसीमा समाप्तिसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैया“ पुग्दै गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैया“को बजेटद्वारा नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान छ ।
औसतीकरण : लागत व्यवस्थापनको अचुक उपाय
अंकित वा निश्चित मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद वा बोनस सेयरबाहेक प्रत्येक खरिदको सेयरको लागत फरक हुन सक्छ । एउटै कम्पनीको सेयर एकै दिन वा विभिन्न समयमा फरक–फरक दरमा किनिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त उही कम्पनीको बोनस, हकप्रद र प्रिमियम मूल्यमा किनिएको एफपीओले पनि विगतको वास्तविक खरिद लागतमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव
विश्वव्यापीकरण विश्व अन्तरनिर्भरताको प्रक्रिया हो । यसको माध्यमबाट मुलुकहरूबीचमा अन्तरनिर्भता सिर्जना हुन्छ । यो सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रियाको गतिशील वेग हो । विश्वव्यापीकरणले विश्व बजारमा खुला प्रवेश दिलाउँछ ।
विश्वका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती छ । अझ नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका सहरी क्षेत्रमा त झन् यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । नेपालमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाल २ सय १७ नगरपालिकाको जनसंख्यालाई जोडेर हेर्ने हो भने सहरी जनसंख्या कुल जनसंख्याको करिब ३७ प्रतिशत देखिन्छ ।
नाम्खामा पर्यटन र व्यापारिक सम्भावनाको खोजी
हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने नाम्खामा पर्यटन र व्यापारिक सम्भावनाको खोजी सुरु गरिएको छ । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकालाई पर्यटन र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न स्थानीयले भदौ १८ देखि २० गतेसम्म एक व्यापार मेलाको पनि आयोजना गरेका थिए । सडक सञ्जालले नछोएको सुन्दर बस्ती नाम्खा–६ को हल्जीमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी भएको थियो ।
नेपालको शिक्षा र अर्थतन्त्र
नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, सक्षमता, तहगत उद्देश्य तथा शिक्षाक्षेत्रका कुनै पनि उपलब्धि सूचकमा सकेसम्म सबै कुरा समेटिने गरी कुनै कुरा नछुटाई राखिएको छ । यद्यपि मानिसले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्ने शिक्षाको समसामयिक अर्थ दुईवटा हुन सक्छन्— पहिलो, जीवन र जगत्को अनुभूतिजन्य बोध र दोस्रो, आय आर्जन र त्यसबाट जीवनका सुविधा प्राप्ति ।
कतै भ्रष्टाचार ‘सुन्ने सहनशीलता’ त हुने होइन ?
केही वर्षअगाडि नयाँ टोयोटा गाडी खरिद गरेर पहिलो पटक सडकमा गुडाउँदै गर्दा पेट्रोल हाल्नुपर्ने भई कुनै एउटा पम्पमा गएर ट्याङ्की भरिने गरी पेट्रोल हालियो । पेट्रोल हालिसकेपछि गाडी गुडाउँदै अगाडि बढ्दै रत्नपार्कनजिक पुगियो ।
उपभोक्ता समिति: अवसर र चुनौती
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनी परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्याविधि २०७४ ले ‘उपभोक्ता’ भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई जनाउँछ र ‘उपभोक्ता समिति’ भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार गर्नका लागि उपभोक्ताले आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।
विद्युतीय रेल : छिमेकीसँग मेल कि झेल ?
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको २०७१ सालमा शिलान्यास भएको ३ वर्ष बिते पनि निर्माण प्रगति शून्य छ । काम थालिएको बर्दिवास–सिमरा खण्डको प्रगति तीन वर्षअगाडि १ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून थियो । उक्त खण्डमा ट्र्याक निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य २०७४ सालसम्म राखेकोमा हाल २०७५ भइसकेको छ । सरकारी स्तरबाट नेपालमा रेल कुदाउने औपचारिक चर्चा हुन थालेको दशकौं भइसकेको छ, तर विद्युतिय रेल कहिले कुद्ने हो, ठेगान छैन् । तर कुरा सुन्दा–भन्दा नेपालमा रेल कुदिसकेको छ ।
के युरोप अमेरिकी साङ्लोबाट मुक्त हुदैंछ ?
“युरोप लामो समयसम्म आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकामा निर्भर रहन सक्दैन,” फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोले पेरिसमा आफ्नो पछिल्लो पटकको भाषणमा भनेका थिए । उनको यो भनाइ नयाँ होइन । यो जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले मे महिनामा गरेको घोषणाको प्रतिध्वनि मात्रै हो ।